Buzz, Viral ama Ereyga Af Suuqgeynta: Waa maxay farqiga u dhexeeya? | Martech Zone
Tuesday, April 14, 2015 Isniin, April 13, 2015 Douglas Karr
Dave Balter, aasaasihii BzzAgent, waxay qabataa shaqo weyn qeexida kala duwanaanshaha Buzz, Viral iyo Ereyga Suuqgeynta Afka ee daabacaadda 'ChangeThis'. Waa kuwan qaybo ka mid ah qeexitaannada weyn ee Dave:
Waa maxay Ereyga Suuqgeynta Afku?
Ereyga Suuq-geynta Mouth (WOMM) waa aaladda ugu awoodda badan meeraha. Waa wadaagida dhabta ah ee ra'yi ku saabsan wax soo saar ama adeeg u dhexeeya laba ama kabadan macaamiil. Waa waxa dhacaya markay dadku noqdaan u-doodayaal sumcadda dabiiciga ah. Waa qadarinta barakeysan ee suuqleyda, agaasimayaasha guud iyo ganacsatada, maadaama ay sameyn karto ama jebin karto wax soo saar. Furaha guushiisa: waa daacad iyo dabiici.
Waa maxay Viral Marketing?
Suuq geynta waa isku day ah in la gaarsiiyo fariin suuqgeyn ah oo si dhaqso leh ugu faafa macaamiisha. Maanta, tani badanaa waxay ku timaadaa qaab fariin email ah ama fiidiyoow ah. Ka soo horjeedka cabsida qaylo-dhaanta, fayrasku ma xuma. Maaha wax aan daacad ahayn ama aan dabiici ahayn. Markay ugufiican tahay, waa erey afku karti u leeyahay, uguna xun, waa uun farriin suuqgeyn kale oo carqaladeynaysa.
Waa maxay Suuq-geynta?
Suuq Buzz waa dhacdo ama waxqabad u soo bandhigaya macaamilka macaamil bulshada, xamaasad, iyo macluumaad. Had iyo jeer waa wax isku daraya dhacdo jilicsan, dhacdo daan-daadin ama waayo-aragnimo leh astaamo saafi ah, sida sawir-qaadista wejigaaga (ama dameerkaaga, sida naadiga caafimaadka ee NYC dhawaan sameeyay). Haddii buzz la saxo, dadku wax bay ka qori doonaan, markaa asal ahaan waxay u noqotaa gaari PR weyn.
Waa kuwan faahfaahin gaar ah oo ku saabsan ereyga Afka Suuqgeynta (WOMM) ee Lithium:
Tags: suuqgeynta buzzlithiumsuuq-geynta faayraskaDumarkaNaagerayga afkasuuq geyn afka ah
Jun 17, 2008 saacadu markay ahayd 9:41 AM
Aniga ahaan waxaan u maleynayaa in erayga afku uu yahay qaab suuqgeyn fiican, laakiin hadana markale waxaan qiyaasayaa inay dib ugu laabaneyso waxa dadku dhab ahaan kaa sheegayo. Waxay noqon kartaa seef laba af leh. Tusaale u soo qaado warshadaha filimada. Waxaan aadaa filimada markay saaxiibbaday ii sheegaan inay filim arkeen oo ay jeclaadeen. Dhinaca foorarka, markaan ku faraxsanahay filimka oo aan warbixin xun ka helo saaxiibkay, waxaan sameeyaa wax iska soo horjeedda saxda ah.
Waxaan la yaabanahay haddii tani ay tahay mid toos ah oo toos ah oo leh baloogyo iyo degello?